Ulawulo lwekhekhe likaVicente Romero | Izidalwa ezikwi-Intanethi
Ukuba uJoaquín Sorolla wayekwazi ukufaka ukukhanya ngokungafani nomnye umntu, singatsho ukuba uVicente Romero uthimba indalo emsebenzini wakhe ngendlela engazange ibonwe. Ukuziva ubushushu okanye ukoma kwelanga okuwa ukutshona kwelanga kuyazihlaziya iimvakalelo ezifumanekayo xa enye ivuselelwa ngokujonga nganye yeekeyiki zazo.
romero usishiya uphawu kuye kuyo yonke imisebenzi yakhe ukuzoba phantse ufuna ukusondela kulaa ndawo ithotyiweyo apho umfazi ohleli khona ejonga kwindawo angqongileyo iinyawo zakhe zimi kancinci esihlalweni. Uthotho lwemisebenzi esiyiqokelelayo kule migca ukuzama ukudlulisa ukuba kunzima kangakanani ukubamba imeko-bume njengoko isenzeka kuninzi lwemisebenzi yegcisa laseSpain.
UVicente Romero ikwachukumisa ukukhanya ngobuhlakani obumangalisayo kweminye yemisebenzi yakhe enje ngeCanson i-Tientes 2015 pastel ephepheni onayo apha ngezantsi. Unyango olugqibeleleyo kunye nezandla ezinobuchule obumangalisayo obuphantse bushiye umntu enxilile.
Asizukuthetha nto malunga neyakho uthando lomfazi Imele ngendlela ephantse yingelosi kodwa ikhona kumaxesha ethu apho sithambekele ekuziphatheni kakubi ngakumbi nakwimikhuba emibi kwezinye iimeko. Umfazi ohloniphekileyo, olula kwaye uthobekile kwimeko yakhe kwaye ubeka uRomero ngendlela enjalo.
Umzobi owazalelwa eMadrid ngo-1956 kwaye ngoku Ufundisa ubuGcisa obuhle kwiFakhalthi yeSan Fernando eMadrid. Uhlala enika iindibano zocweyo kwizitudiyo ezithile, njengoko kwenzekile kwiinyanga ezidlulileyo IHellas Art Studio apho ndichithe iminyaka embalwa ndisebenza. Unako ukumlandela rhoqo facebook wakho ukuthathela ingqalelo imisebenzi yakhe emitsha, imiboniso kunye neendibano zocweyo ezifana nezikhankanyiweyo.
Umzobi okhethekileyo kunye nomculi esiza kumlandela kule migca ngezihlandlo ezininzi kwaye ngubani iveza ubuchule obukhulu kunye nekhekhe. Ukuba ujonge ukukhanya, yiza kolu ngeno.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Abadlali » Ikeyiki kunye nomfazi umsebenzi ezizodwa Vicente Romero